My Geofumadas - Bogga 2 - Geofumadas
Waxyaabaha cajiibka ah, baaritaanada iyo casriyeynta
Ku safridda Nicaragua ee dhulka ... waa daal, iyadoo shirkaddu ay si dhib yar uga socoto GaiaGPS iyo waqti ku filan oo lagu xoojinayo hannaanka caddeynta ee Geofumadas oo kaliya akhristayaasha daacadda ah ay awoodi doonaan inay wax ka ogaadaan toddobaadyada 2 ee soo socda. Waa wax xiiso leh in la maqlo wax ku saabsan mashaariicda sameeya cadastre adoo adeegsanaya Google Earth kaalin ahaan, waa wax lagu qanco in lala wadaago xubnaha ka socda ...
Raajo degdeg ah ee Geofumadas in ka badan bilaha 75
Kadib sanad iyo badh markii aan madax banaanaano hoosta geofumadas.com, waxaan gaarnay in kabadan 70,000 booqashooyin bishiiba. Taasi waa wax badan oo kuwa raacaya boggan tan iyo markii la aasaasay waxay arki doonaan in muddo kadib waxyaabo aad u yar oo isbeddello baaxad leh lahaa, halkii arrimaha qaarkood la sii waday. Shakhsi ahaan, ka dib ...
INDEX, egeomates My
Sida loo ogaado Geofumadas
Geofumadas ayaa jira illaa 2007, in ka badan maqaallada 1,200 ayaa noo horseeday booqashooyinka 100,000 bishiiba iyada oo laga bilaabayo xoqitaan laga bilaabo Janaayo 2011 oo aan u soo haajirnay Geofumadas.com. Waqtiyada cusbooneysiintu way kala duwanaayeen, laga soo bilaabo da'da xasaasiga ah ee 40 maqaal bille ah illaa jeer marka Twitter iyo Facebook ay soo dejiyaan ...
Isgaarsiinta luuqada Isbaanishka, maalin ah dabaasha Z! Meelaha
Jaantuskan soo socdaa waa muunad laga soo qaatay mid ka mid ah maalmaha ugu badan ee gaadiidka (Talaadada, Arbacada iyo Khamiista badanaa waa). Waxaan u isticmaalayaa Arbacada tusaale ahaan, taas oo naga caawineysa inaan muujino baaxadda goobaha ay leeyihiin shaqsi ahaan iyo sida ku jirta qaabka Z! Meelaha waxay ku daraan suurtagal soo jiidasho leh gudaha ...
Featured, Internet iyo Blogs, egeomates My
Gabriel Ortiz, Cartesia iyo Geofumadas waxay ku biiraan Project Z! Meelaha
Z! Meelaha waxay damaanad qaadayaan in badeecooyinkooda iyo adeegyadoodu ay gaaraan suuqa Hisbaanikada ... hal mar! Seddex ka mid ah goobaha ugu caansan ee deegaanka Hispanic ee ku jira mawduuca Geo-Engineering ayaa ku dhawaaqaya bilaabida Z! Meelaha, xalka shirkadaha iyo xirfadleyda si ay u dhigaan wax soo saarkooda iyo magacyadooda halka ay ...
Geofumadas, sanadka 1 ee Shabakadaha Bulshada
Sannad ka hor waxaan go'aansaday inaan geliyo Geofumadas macnaha guud ee Shabakadaha Bulshada. Tirooyinku waa kuwo xun oo ka hadlaya wax aad u yar, laakiin waxaan rabaa inaan ka faa'iideysto maqaalka si aan u muujiyo aragtidayda ku saabsan. Janaayo 2012. Raacayaasha Facebook ......... 15,946 Janaayo 2012. Raacayaasha Twitter ........ 1,079 Waan qirayaa, way igu adkaatay inaan helo macne soo jiidasho leh oo ku saabsan mowduuca shabakadaha ...
Maareynta aqoonta, adduunku wuu is beddelay
Waxaan ku noolnahay waqti ay tahay in qaab-dhismeedka maaraynta aqoonta qadiimiga ah wax laga beddelo. Waxaa jira deegaanno aan weli dooneyno inaan ku ilaalino ku dhaqanka qaabkii awoowayaasheen, markii aqoonta lagu uruuriyay kuwa waaweyn oo laga iibiyey dadka deggan iyadoo la adeegsanayo astaamo wax is daba marin ah. Haddii ay dhacdo sida kuwii iga horreeyay ee Mayan, wax walba iyo ...
Budhcad badeednimada, mowduuc aan dhammaanayn
Kaliya maalmahan uu Sharciga SOPA na haysto, waa xattaa xasaasi in lagu dhaawaco u nuglaanta arrinta inta uu le'eg yahay xuquuqda lahaanshaha aqooneed iyo halka ay ka bilaabmayso xuquuqda shaqsiyadeed ee gaarka ah ama maaraynta aqoonta wadareed. Waxay u badan tahay in jiil ka yar 20 sano ay ...
Geofumadas ... 2 wikileaks ka hor intaan 2011 dhamaado
Kaliya seddex maalmood ilaa dhamaadka 2011, waxaa la ii fasaxay inaan la xiriiro ugu yaraan labadan war ee nolosheena wax ka badali doona sanadka 2012: 1. Microsoft waxay iibsataa Bentley Systems. Sida la maqlay, Microsoft waxay gaadhay heshiiskii ugu dambeeyay si ay ula wareegto udub-dhexaadka Bentley Systems ee lagu gaadho Kaabayaasha Bentley 500; qadarka…
AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley, egeomates My
Kadib in kabadan 50 bilood oo qoris ah, kani waa soo koobid. Jaleecada hore, in kasta oo xulashada lagu saleeyay aragtida bogga, shucaaca ayaa ah: 13 waa inay ku xidhaan AutoCAD ama barnaamijyadooda toosan. Mawduuc joogto ah, oo ka mid ah wararka ku saabsan noocyada cusub, adeegsiga wax ku oolka ah ee Rayidka ...
Featured, INDEX, egeomates My
Sannadkii wuu dhammaaday, waxa kaliya ee aan doonayo waa inaan jiifsado jiingad, seddex maalmood oo isku xigta seexdo oo aan dib u helo hurdo la’aantii soo ururtay; Wax yar baan u kacay inaan qaato maraqa cuntada badda ee hooyaday sodohday samayso, digaagga malabka ku jira iyo turkiga habeenka haray… uf! kaliya dhowr maalmood ka badan. Sida qof walba ...
5 2013 qaababka cusub ee AutoCAD
Qaar ka mid ah wararka aan ku aragnay nooca beta ee AutoCAD 2013 oo loogu yeeray noocyadan Jawska ayaa noo sheegaya nooca isbeddellada aan arki doonno Abriil 2012, goorta si rasmi ah loo bilaabi doono; inkasta oo aan si dhib yar u shiidanay AutoCAD-da cusub ee 2012. Bilowgii, warka horay loo ogaa: Qaab cusub oo dwg ah 2013!. The…
AutoCAD-AutoDesk, tabo cusub, egeomates My
Paper.li sameyso wargeys dijitaal ah oo kuu gaar ah
Waxaa loo magacaabay abaalmarinta Mashable, qaybta Warbaahinta Bulshada oo ah mid ka mid ah adeegyada warbaahinta bulshada ee ugu kobcaya. Ficil ahaan waxay noogu muuqataa mida ugu fudud, asal ahaan ka jawaab celinta ujeedada: Haddii aan heli lahaa wargeys dijitaal ah oo ah waxa ugu muhiimsan ee aan raaco ... maxaan ula wadaagi lahaa dadka kale? Laga soo bilaabo…
Haddii Geofumadas haysto akhristayaasha 100
Maqaalkani wuxuu ka tarjumayaa tirakoobka laga soo qaaday Janaayo ilaa Oktoobar 2011 ee Google Analytics, oo la fududeeyay haddii ay jiraan kaliya 100 akhristayaasha boggan. Way cadahay inay tahay milicsiga macnaha guud ee Hispanic-ka, oo aad uga duwanaan lahaa haddii boggu mudnaan ku lahaa luqad kale ama ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 8 page Next